Tuesday February 28, 2017 - 01:51:07 in Somali News by Super Admin
Waagacusub.net - Madaxweyne Farmaajo wuxuu shacabka Soomaaliyeed u sheegay balanqaadyo duuduub ah oo Saudi Arabia u ballanqaadeen Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo isagu maxuu u balan qaaday Sacuudiga? Warbixino la helay!
1- inuu ka aamuso heshiiska UAE la gashay Maamulka Somaliland oo dekeda Berbera iyo saldhig milateri uga sameysanayso magaalada Berbera
2- Dhaqdhaqaaqyadda hawlaha Turkey Somalia kawado tartiib dawladda Somalia u joojiso, sida dekeddda iyo garoonka Muqdisho looga wareejiyo Turkey-ga muddo 6 ilaa 12 bilood ah. Saldhiga Milateri oo Turkey Somalia ka furanayo la joojiyo.
3- Dekedaha Soomaaliya sida Muqdisho, Boosaaso iyo Kismaayo lagu wareejiyo dawladda UAE oo ka wakiil ah Golf Cooperation Council GCC.
4- Dawladda Soomaaliya gacan siiso ama ka aamusto hawlahha UAE ka wado Soomaaliya hawlahaa oo lagu wiiqayo midnimada iyo qaranimada Somalia, sida UAE inay sii xoojiso tababarka iyo qalabeynta ciidamada dawlad goboleedyada iyada imaaraadka isticmaalayaan company -yo sida Saracen oo Puntland marine gacanta ku haysa. Dawladda Somalia taageerto qorshaha UAE magaalada muqdisho ugu aruurinayso, tababareyso ciidamo aan kasoo jeedin beesha Hawiye.
Dhamaan qodobadaa ayuu madaxweyne Farmaajo soo aqbalay soona saxiixay.